Ndezvipi zvakanakira Takumi iridium spark plug? -FAQ-TAKUMI AUTO CHIKAMU
TAKUMI inonyanya kuita aotomobile spark plug, maindasitiri emoto plug recerch & budiriro makore makumi mashanu. Iridium spark plugs yeTAKUMI yaibvumidzwa zvakanyanya nevatengesi veMiddle East, East Asia neRussia.
Tiri kutora vatengesi vakanaka kwazvo pasirese.
Waht ndiwo maficha eTAKUMI Iridium spark plug?
TAKUMI Iridium spark plug ine maficha epamusoro pekunyungudika, kusimba kwesimba uye nehupamhi hweukukutu, izvo zvinoita mukana wakakura kune mota, mudhudhudhu uye maindasitiri jenareta ma plug plugs:
Chakanakira 1, Kuwedzera mafuta hunyanzvi. Iine Iridium spark plugs, mota hadziwanzo dzika kana kudzima zvisingatarisirwi pasi pemamiriro akasiyana siyana ekutyaira, kuverengera kupisa kwakanaka uye kudzikisa kushandiswa kwemafuta
Chakanakira 2, Hupenyu hwakareba hupenyu. Mazhinji emapulagi ari pamusika nhasi maNickel-alloy spark plugs, ane hupenyu hushoma hwekiromita dzinosvika zviuru makumi maviri, nepo Iridium spark plugs inogona kugara makiromita zviuru makumi matanhatu kusvika makumi masere.
Chakanakira 3, Kuchengetedza mafuta. Yakakwira mhando Iridium spark plug inogona kukurumidza kubatidza nzvimbo yekuvesa, senge yakaonda Iridium spark plug, iyo inogona kuita kuti mafuta atsve zvizere, nokudaro ichichengetedza mafuta ekushandisa.
Prev Peji: Kunyangwe iyo Iridium spark plugs iri garandi yeupenyu?
Inotevera Peji: hapana